मेची क्याम्पसमा बौद्धिक पार्क बन्दै « Loktantrapost
८ माघ २०७६, बुधबार १४:५०
भद्रपुर । मेची बहुमुखी क्याम्पसको हाताभित्र प्रदेश नं. १ का पाँच विभूतिको प्रतिमासहित बौद्धिक पार्क निर्माण सुरु गरिएको छ ।
सहिद राम थापाको सालिकको उत्तरपट्टि निर्माण हुने पार्कमा गुरुजी श्री १०८ मङ्गलदासजी महाराज, महागुरु फाल्गुनन्द, बालागुरु षडानान्द, डा. स्वामी प्रपन्नाचार्य र दानवीर देवीप्रसाद उप्रेतीको परिचयात्मक अभिलेखसहित मूर्ति स्थापना गरिने मेची बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कमल गुरागाईले बताए ।
पार्कको निर्माण मङ्गल सेवा समिति भद्रपुरले गर्ने भएको छ । समितिका अध्यक्ष गोपालदास खनालका अनुसार समिति र क्याम्पसबीच पार्क निर्माणका विषयमा सम्झौता भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत मङ्सिर २७ गते पार्कको विधिवत् शिलान्यास गरेका थिए ।
मानवीय सेवामा समर्पित मङ्गल सेवा समितिले यस अघि चन्द्रगढी एयरपोर्टमा लाखौंको खर्चमा मङ्गल बाटिका निर्माण गरेको थियो । अब मेची क्याम्पसको सौन्दर्य र महत्व बढाउने गरी बौद्धिक पार्क निर्माणमा समिति जुटिसकेको खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार पार्कको प्रारम्भिक लागत रु. ३० लाख अनुमान गरिएको छ । सम्झौतामा एक वर्षभित्र पार्कको निर्माण सकेर क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
मङ्गल सेवा समितिका सदस्य एवम् व्यवसायी अजेय साहेवालाको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरिएको छ भने गुणस्तरीय निर्माणलाई सुनिश्चित गर्न क्याम्पस प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र संस्थाका प्रतिनिधि गरी तीन सदस्यीय पार्क अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
निर्माण सकिए पछि समितिले क्याम्पसलाई पार्क हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपश्चात पार्कको हेरचाहको जिम्मेवारी क्याम्पसले नै लिने भएको छ ।